Waxaa Socota Hadal-hayn ah, in Jwxo-shiil, Laga Masaafurin Doono Dalka Ingriiska – Rasaasa News
Jul 17, 2010 in Jwxo-shiil, Laga Masaafurin Doono Dalka Ingriiska, Ogaden, ONLF, Waxaa Socota Hadal-hayn oo ah
“Eedaysanow waa lagu arkaa waana lagu ogyahay” sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah dadka Jwxo-shiil dacwada la daba socda ee u haysta dilalka uu u gaystay dad ehelkooda – waxaa ayaamahan aad la isula dhexmarayaa in ay socdaan arimo badan oo ka dhan ah Jwxo-shiil iyo xubno la sheegay in ay wada shaqayni ka dhaxayso isaga.
Jwxo-shiil, oo mar ahaan jiray gudoomiyaha Jwxo, ayaa waxaa uu ka shaqeeyey sidii ay u burburi lahayd Jabhada ONLF. Jwxo-shiil, oo garabsanaya xukuumada Eritrea, ayaa ka galay ummada Somalida Ogadeeniya dambiyo aan hore uga dhicin dalka.
Jwxo-shiil, waxaa uu cwxo, ka dilay sababa la,aan 180 N/hure, oo ay ku jiraan 80 N/hure oo lagu hogeeyey xeradii galaal-xoor ee Casab, Eritrea.
Marka laga yimaado burburka uu u gaystay Jwxo, ayaa waxaa uu ka galay dadweynaha Somalida Ogadeeniya dambiyo badan oo isugu jira kuwa guud iyo kuwa gaar oo ay ka mid yihiin kuwan hoose;
Dilkii 74 ruux ee Cobale oo u badan hal qoys iyo 9 ruux oo shiinays ah.
180 N/hure oo ka tirsanaa cwxo, oo 80 ka mid ah lagu dilay god ku yaal Casab.
Dad shacab ah iyo hanti gaadiid oo tiro badan oo la dilay, lana gubay
Xubno badan oo ka tirsanaan jiray ciidanka iyo masuuliyiinta UWSLF, oo sabab la,aan lagu dilay
Dr.Dolal, oo haystay dhalashada Ingiriiska iyo N/hure Jamaal dheere, sabab la,aan lagu dilay
Dilkii ugu Dambeeyey ee Liqowe Muxumed Tayse, oo ahaan xisaabiya shacab ah, oo la dilay.
12 Cuqaal ah oo reer Wardher ah, oo uu ka mid ahaa Ugaaskii Beesha Abraahiin.
Dambiyo kale oo aan xisaab lahayn, balse kolka aad tagto dhulka Somalida Ogadeeniya ay dadku kuu sheegayaan arimo aad ka naxdo ayaa jira oo kuligood uu Jwxo-shiil masuul ka yahay.
Arimahan waxay keeneen in Jwxo-shiil ay ummadu u nacdo sida malaku-mawdka dadka dila, ruux walba oo ka mid ah dadweynaha Somalida Ogadeeniyana wuxuu ku taamayaa in laga gudo dambiyada uu ka galay.
Hadaba, sida aanu ku helay warar hoose, ayey qaar ka mid dadkii uu eheladooda dilay Jwxo-shiil, doonayaan in ay maxkadam hor keenaan si loogu ciqaabo dilalka uu gaystay. Waxaana arintan dabada ka riixaya wakiilada degmooyinka ay dadkaasi degan yihiin iyo waliba Jaaliyadaha u dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya ee degan dalka Ingriiska.
Sharciga dalka Ingriiska ayaa waxaa uu qabaa in aan ruuxna lagu ciqaabi karin dambi uu ku soo galay dal kale, hadiise uu ruuxaasi dilay ruux Ingriis ah waa la maxkamadayn karaa. Sharciga dalka Maraykanka ayaa ka gadisan kan Ingriiska, waana arinta keentay in dalka Ingriiska ay joogaan dad badan oo dambiyo ku soo galay dalal banaanka ka ah dalka Ingriiska.
Ururada u dooda xuquuqda dadka ee dalka Ingriiska, ayaa aad uga soo horjeeda sharcigan una ololaynaya in ruux kasta oo dambi galay, meesha uu doono ha ku galee la maxkamadeeyo hadii dacwad lagu soo oogo.
Ehelada dadka uu dilay Jwxo-shiil ee degan dalka Ingriiska, ayaa waxay xidhiidh la yeesheen ururada xuquuqda. Waxaana socda arimo la damcsan yahay in Jwxo-shiil, laggaga caydhiyo dalka Ingriiska, madaama uu jiro sharci ka mid ah sharciyada Ingriiska oo odhanaya hadii loo aqoonsado dambiile ruux haysta dhalashada Ingriiska , balse uuna asalkiisu ahayn Ingriis in laga qaadi karo dhalashada, dabadeedna lana masaafurin karo ruuxaas.
Labada qodob ee dambe ayey labaduba qabanayaan Jwxo-shiil, hadiise ay noqoto in Jwxo-shiil, laga masaafuriyo dalka Ingriiska, ayaa dalka kaliya ee lagu celin karo uu noqon dalka Somaliya, oo ah dalka uu qaxootinimada ku codsaday, in kasta oo uu madax ka ahaa muddo ururka mucaaradka ah ee la dagaalama xukuumada Itobiya [ONLF].
Xukuumada Itobiya ayaa hore uga codsatay qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka in loo soo masaafuriyo [extrdiation] xubno ka mid ah ururka [ONLF], xubnahaas oo ay u haysato in ay dambiyo ka galeen gabalka Ogaden, lama ogga in uu Jwxo-shiil xubnahaas ka mid yahay iyo in kale.
Ehelada dadka uu Jwxo-shiil, dilay ayaa meelo badan la xidhiidhay iyaga oo kaashanaya ururada xuquuqda, waana arimaha keenay baa la leeyahay in Jwxo-shiil loo diido in uu galo dalka Maraykanka iyo dalal kale oo uu visa ka codsaday.
Waxaa kale oo hada uun dhacday baa la leeyahay in Booliska dalka Ingriisku ka joojiyey Jwxo-shiil, shir uu ku qaban lahaa magaalada London ee dalka Ingriiska, oo hore loogu xayeysiiyey boggaga Internetka ee u shaqeeya isaga, ka dib markii ay ehelada dadka uu laayey ay dacwad geeyeen Booliska.
Hore ayaa waxaa loogu diiday kooxda Jwxo-shiil, in la siiyo ruqsad ay ku banaan bixi karaan safaarada Itobiya iyo waliba masuuliyiinta Itobiya ee booqashada ku taga dalka Ingriiska.
Arimahan hada socda ayaa waxay ood afka ka saaridoonaan, dhaqdhaqaaqyadii mudada socday ee ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku doonayeen in ay cadaadis ku saaraan xukuumada Itobiya.
Ehelada dadka la laayey ayaa waxay ku doodayaan, in uusan dambigu ku koobnaan doonin Jwxo-shiil oo kaliya, balse ay soo galidoonaan qaar ka mid ah dadka la shaqeeya.